Docker: Etu esi etinye ụdị nke kachasị ọhụrụ na DEBIAN 10? | Site na Linux
Docker: Etu esi etinye ụdị nke kachasị ọhụrụ na DEBIAN 10?
La virtualization nke sistemụ arụmọrụ na Ngwa ma ọ bụ Sistemụ nwere ihu ọma nwere ike ịkekọrịta na otu Hardware, ọtụtụ ihe nke ndị a na-arụ ọrụ kpamkpam.
Abia na virtualizing Sistemụ arụmọrụ con free, free na / ma ọ bụ oghe teknụzụ, teknụzụ ma ọ bụ ngwa a na-ahọrọkarị, dị ka Promox, Xen, VirtualBox, QEMU ma ọ bụ KVM. Ma mgbe ọ bịara, Ngwa ma ọ bụ Usoro, a na-ebukarịkarị ya Kubernetes ma ọ bụ Docker.
Ikpeazụ 2 ndị a bụ teknụzụ na-eme ihe na-adabere na akpa. N'ihe banyere Docker, a tọhapụrụ ya na afọ 2013, dị ka akụkụ nke a mmepe mmepe akpọ Njin Docker. Na wee uru nke ẹdude ọganihu nke oge, ya bụ, echiche na ihe ọmụma banyere containers ka ụbọchị site na Sistemụ arụmọrụ free na / ma ọ bụ na-emeghe (Unix / Linux)dika cgroups na aha oghere, iji kwalite ebe a na-arịwanye elu nke nkà na ụzụ.
N'oge gara aga anyị kwurula banyere ya Docker, nke bụ ya mere na anyị agaghị enyocha ihe ọ bụ, ma ọ bụ ihe e ji mara ya, akụrụngwa ya, ma ọ bụ nkọwa ndị ọzọ ma ọ bụ ihe ya. Yabụ, anyị ga-elekwasị anya na ịwụnye nke ugbu a (19.03.8) banyere DEBIAN 10 (Buster) y - GNU / Linux Distros, yiri ma ọ bụ dabere na ndị a, dị ka MX Linux 19.
Agbanyeghị, iji nwetakwuo ihe ọmụma ị nwere ike ịnweta akwụkwọ anyị gara aga na Docker.
Etu esi etinye Docker na Raspberry pi na Raspbian?
Ọhụrụ Docker Container 18.09 bịara na mmelite ọhụrụ
Akọrọ: onye njikwa mmekọrịta CLI maka mmekọrịta Docker
Etu esi etinye Docker na Linux Mint 18 Sarah
1 Gịnị bụ Igbe?
2 Docker: Usoro nwụnye na DEBIAN 10 (Buster)
2.1 A. Nzọụkwụ 1
2.2 B. Nzọụkwụ 2
2.3 C. Nzọụkwụ 3
2.4 D. Nzọụkwụ 4
2.5 E. Nzọụkwụ 5
2.6 F. Nzọụkwụ 6
2.7 G. Nzọụkwụ 7
2.8 H. Nzọụkwụ 8
Gịnị bụ Igbe?
Tupu ịmalite usoro ntinye nke a teknụzụ na-eme ihe na-adabere na akpa, ka emechaa nwee ike iwunye ngwa ma ọ bụ usoro ọ bụla site na a "Akpa", ọ dị mkpa ime ka o doo anya ihe na-aghọtachaghị, ihe akpa pụtara.
Na-ekwu ihe HPE (Hewlett Packard Enterprise) peeji ọrụ banyere nkà na ụzụ kwuru, ọ na-agwa anyị ihe ndị a:
"Ndị nwere ngwa ngwa bụ gburugburu oge dị larịị nke na-enye ngwa na faịlị, mgbanwe, na ọba akwụkwọ ha chọrọ iji rụọ ọrụ, si otu a na-eme ka ọrụ ha dịkwuo elu.".
"Ọ bụ ezie na ọdịnala Virtual Machines (VMs) na-enye ohere ka a na-ahụ maka akụrụngwa na-arụ ọrụ, Ihe nkata na-eme ka nke ngwanrọ ngwanrọ. N'adịghị ka Virtual Machines, Containers na-eji ụlọ ọrụ sistemụ arụmọrụ ha (OS) kama ịnye nke ha".
Docker: Usoro nwụnye na DEBIAN 10 (Buster)
A. Nzọụkwụ 1
Kwadebe Usoro njikwa maka nwụnye.
B. Nzọụkwụ 2
Download isi ihe na Ebe nchekwa gọọmentị, hazie ụlọ ọrụ gọọmentị na-akwado faịlụ ndị dị na ya, yana ụdị nke anyị GNU / Linux Distro. Maka anyị, DEBIAN 10 (Buster) ma ọ bụ ndị ọzọ - GNU / Linux Distro, yiri ma ọ bụ dabere na ya, dị ka MX Linux 19.
C. Nzọụkwụ 3
Wụnye ngwa ma kwado faịlụ ndị dị mkpa.
D. Nzọụkwụ 4
Nyochaa ngwa ntinye aka, na-agba ọsọ nke nrụnye nke ule nyocha akpọrọ Ndewo Ụwa.
E. Nzọụkwụ 5
Lelee ụdị nke ngwa arụnyere.
F. Nzọụkwụ 6
Nzọụkwụ a bụ nhọrọ, ebe ọ bụ na ọ bụ isi iji chọpụta na ebudataghị ma tinye ya akpa ọzọ, mgbe a gwara ya ka ọ gbaa ya ọzọ.
G. Nzọụkwụ 7
A pụkwara iwere nzọụkwụ ọzọ a dị ka nhọrọ, ebe ọ bụ isi na-ekwe ka a "Onye ọrụ na-abụghị onye nchịkwa" nwere ike na-agba ọsọ a akpa na-enweghị mkpa ikike "onye nchịkwa". Maka ọmụmụ ihe a, a ga-enye onye ọrụ dịnụ aha ya "Ogechukwu".
H. Nzọụkwụ 8
N'ikpeazụ, ihe kachasị mma tupu ịmalite iji kpamkpam Docker, bụ ịmalitegharịa ma kwado mmalite nke Ọrụ ahụ na ogbugbu nke ule ule.
Mgbe e mesịrị, na akwụkwọ ọzọ gbasara teknụzụ kwuru ma ọ bụ metụtara ya, anyị ga-anwa ịtinye ụfọdụ ngwa ma ọ bụ sistemụ ọzọ iji gaa n'ihu mụta ịmụta ya. Agbanyeghị, maka nkuzi nke onwe ma ọ bụ ịmata ihe, enwere akwụkwọ ntuziaka mara mma nke nwere ozi ndị ọzọ metụtara ya nwụnye na DEBIAN GNU / Linux 9/10 na mpaghara ederede nke saịtị docker.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere Docker, otu o si aru oru na nke eji ya na ndu, inwere ike inweta uzo 2 ndia: RedHat y AWS Amazon.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere nke a magburu onwe ngwa na «Tecnología de Virtualización basada en Contenedores» oku «Docker», nke na-enye ihe mgbakwunye nke abstraction na automation nke virtualization nke ngwa na otutu Sistemụ arụmọrụ; bụrụ otutu mmasị na ịba uru, Maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Docker: Etu esi etinye ụdị nke kachasị ọhụrụ na DEBIAN 10?
Facebook weputara ihe nkwado nke na-eme ka njikwa nchekwa Slab na Linux
Rebuilderd - Nnwere onwe ọnụọgụ ngwugwu nkwenye usoro maka Arch Linux